Zimbabwean Global Diaspora Platform - Diaspora Associations of Zimbabwe
Global Diaspora of Zimbabwe Platform - Locate, Network, Partner, and Engage with Zimbabweans Wherever They Live
2. Mission and Vision for the Global Diaspora Associations of Zimbabwe
3. Objectives for the International Diaspora of Zimbabwe
Several people from Zimbabwe are leaving their home country to go to others countries each year, seeking better opportunities, or trying to adjust to life’s challenges and solicitations. Sometimes, brain drain (migration of educated people) is seen as one of the greatest threats against the development of most countries including Zimbabwe. Nevertheless, some developed countries are promoting policies and immigration laws that encourage foreign educated pundits or talented graduate students to leave Zimbabwe to move abroad.
Unfortunately, many Zimbabweans are usually disappointed by what they see after moving abroad, and others are disconnected from people and opportunities in Zimbabwe as well as in their new host country. Because of a lack of information or right connections, those who migrate do not always produce the best of themselves or successfully integrate into their new environment. The immigrants from Zimbabwe who succeed often don’t collaborate or network with the newly arriving immigrants or with those who are not reaching their dreams.
At the same time, Zimbabwe would love to find and engage with the Zimbabweans living in the diaspora, but this type of relationship is not working well. Besides money they send back to their relatives, the global Diaspora of Zimbabwe do not contribute to the development of Zimbabwe as wished. Those who want to engage in humanitarian, fundraising, or philanthropy activities to give back don’t know how, where, and whom to contact to reach the real needy or to solve the real problems. At the same time, the diasporas of Zimbabwe are usually unknown by many businesses, nonprofits and other organizations with whom they can do business in their country of residence and in Zimbabwe. This global problem impoverishes nations and deprives many organizations from reaching most of their potential market, clients, and customers.
With the increasing rise of crises, wars, and catastrophic events around the globe, migration of the people of Zimbabwe will keep growing and its corresponding problems will get worse if appropriate actions are not taken now. To sustainably solve this problem, a global system must be built where the diaspora associations of Zimbabwe, the people and organizations in Zimbabwe and in the host country of the diaspora can work together to help each other mutually. That’s what we are trying to achieve here via the DiasporaEngager platform!
Are you from Zimbabwe or are you trying to find opportunities from Zimbabweans living in the diaspora or living in Zimbabwe?
Are you trying to find and engage with the Zimbabweans?
Are you looking for a diaspora association of Zimbabwe?
Are you seeking business opportunities or something else from the diaspora network of Zimbabwe?
Do you have a message or something to share with the Zimbabwean diasporas?
Are you an authority from Zimbabwe trying to reach out to the Zimbabweans living in the diaspora?
DiasporaEngager aims at being the world’s premier provider of liaisons between all diasporas, including the global diaspora of Zimbabwe, the people and organizations living in Zimbabwe, as well as the people and organizations in the host country of the Zimbabwean diasporas, to detect, harvest, and transfer resources, services, and opportunities between people and their nations in a win-win framework. DiasporaEngager is the global diaspora engagement platform that aims at connecting the international diasporas of Zimbabwe to each other and to the diaspora associations of other countries, and to opportunities with governments, nonprofits, businesses, laboratories, international institutions, schools, and research institutions in Zimbabwe and abroad. DiasporaEngager platform assists the global diasporas of Zimbabwe and the organizations in their networks to provide effective working, networking, and development strategies in Zimbabwe as well as in the current country of residence of the Zimbabwean diaspora.
DiasporaEngager aims at creating and linking all the diaspora networks of Zimbabwe with their corresponding immigrants, and with people and organizations; then, uses this international network as a tool to:
Mobilize resources and maximize the outcome of networking and cooperation in any area pertaining to the development of Zimbabwe, the Zimbabweans, and the nations and organizations involved in this effort;
Create an international social media platform based on the potential of the global diaspora of Zimbabwe and use that as a strong resource for education, communication, consulting, lobbying, diplomacy, advocacy, benchmarking, capacity building, entrepreneurship, fundraising, investment, business opportunities, and much more, to sustainably improve lives and the development of nations, including Zimbabwe, based on the networks of the professionals of Zimbabwe living abroad and at home.
(b) with their fellow citizens living back home in Zimbabwe;
(d) with people the diaspora associations of other countries in order to harness, exchange, and transfer opportunities to bridge developmental gaps between the Zimbabweans abroad or at home, and other nations according to their needs and means in a win-win framework.
All it takes to start using this global platform of the diaspora network of Zimbabwe is to register a free account. If you have not registered an account on DiasporaEngager yet, please click here to register today: https://diasporaengager.com/miniRegister. It is free!
We build a global Zimbabwean Diaspora Directory and a skills database of the citizens of Zimbabwe living in the diaspora and we encourage them to list and make themselves more searchable and accessible to those from their host country and from their home country and vice versa.
We help Zimbabwe to better know who and where its diasporas are, in addition to knowing more about the foreigners and diaspora associations living in Zimbabwe.
We encourage all the global diaspora of Zimbabwe to network among each other and to collaborate with Zimbabwe to assist in alleviating the negative impact of brain drain.
We restore the connection, improve communication and the working relationships among the members of the diaspora of Zimbabwe, their country of birth (i.e. Zimbabwe) and their current country of residence.
We offer the Zimbabwean diaspora network a diverse range of services to better organize themselves and help each other abroad.
We facilitate the creation of professional networks among the diasporas of Zimbabwe (e.g. Zimbabwe Doctorates living in the diaspora, Zimbabwe scientists in the diaspora, Zimbabwe Nurses in the diaspora, etc.).
We inform the diasporas of Zimbabwe about existing opportunities in their host country as well as in their native countries and vice versa.
We encourage the Zimbabweans living abroad to invest their time and energy in the development of Zimbabwe.
We allow the countries that are hosting the diaspora of Zimbabwe to better understand the potential and opportunities of the Zimbabwean diaspora.
We serve as a channel between the Zimbabwean diaspora associations and their country of birth to harness as well as to transfer any opportunities and resources toward the places of need.
We assist the Zimbabweans to quickly explore, discover, and invest in new opportunities around the globe.
We provide the international diasporas of Zimbabwe with the tools to influence the decision making in Zimbabwe while being more efficient and productive in their host countries.
We ease the integration of new immigrants from Zimbabwe into the new host country.
We allow the diaspora network of Zimbabwe to better enlighten the leaders and institutions in Zimbabwe with new technologies and cutting edge sciences.
We help the government of Zimbabwe and Zimbabwean global diaspora to create and understand their path to success in a mutual way.
We also aim at working with and encouraging the institutions and government of Zimbabwe to use this platform to find and engage with their diaspora wherever they are living.
From your homepage, you can create a new group (e.g. diaspora group of Zimbabwe living in any country or sharing a specific interest) to discuss and collaborate with others that share the same interest.
To start receiving updates and opportunities related to the global diaspora and/or to the diaspora of Zimbabwe, please click here to subscribe to our newsletter today or go to http://diasporaengager.com/Newsletter! It is free!